Tsy fanatrehana fivoriana maharitra : andrasana ny fanapahan’ny HCC momba ny loholona Lylison | NewsMada
Tsy fanatrehana fivoriana maharitra : andrasana ny fanapahan’ny HCC momba ny loholona Lylison
Ahoana marina ny amin’ny “Raharaha loholona Lylison René de Roland”? Andrasana ny fanapahan’ny HCC ny amin’ny tsy fanetrahany fivoriana maharitra…
“Anjaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny milaza hoe ekena sa tsia ny antony tsy azo anoarana tsy nanatrehan’ny loholona Lylison René de Roland fivoriana hatramin’izay.” Izay ny fanazavan’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, teny Anosy, omaly, momba ny “Raharaha loholona Lylison René de Roland” amin’izao fotoana izao.
Raha tsiahivina, tsy tonga nanatrika fivoriana izy hatramin’ny nikarohan’ny mpitandro filaminana azy noho ny fiantsoany tanàna maty, ny 25 mey 2016. Raha manatrika fivoriana izy: voasamboatra avy hatrany. Azo ekena ho antony tsy azo anoarana amin’ny tsy fiatrehana fivoriana ve izany?
Izay koa ny nangatahan’ny birao maharitry ny Antenimierandoholona ny hevitry ny HCC, raha mbola loholona ihany izy na tsia amin’izay tsy fiatrehana fivoriana maharitra izay.
Mifamahofaho ny raharaha
Mifangaro amin’izao fahazoany sazy tamin’ny fitsarana tampotampoka ny fanalana azy tsy ho loholona. Ny fanalana azy tsy ho loholona intsony no nanaovana ny raharaham-pitsarana tampotampoka sy tsy nampahafantarina mialoha?
Na izany aza, nambaran’ny filohan’ny Antenimierandoholona fa afa-manao fanohanana ny didim-pitsarana izy. Nefa nohazavainy koa fa tsy mitovy ny fanohanana na fanoherana didim-pitsarana sy ny fampiakarana fitsarana ambony.
“Amin’ny fampiakarana fitsarana ambony, afa-manao izany na ny tenan’ilay olona na ny mpisolovava na ny manampahefana”, hoy izy. Amin’ny fanohanana, tsy maintsy ny tenan’ilay olona no mitranga eo amin’ny mpirakidraharaha ary milaza hoe manao fanohanana ny didim-pitsarana izay tsy natrehiny izy.
Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaha? Misy ny manahy izao ho politika…